emotions Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / emotions
के समस्याले हुँदैन चरम यौन आनन्द ?
Tags: alert-news, emotions, sexproblems, sextips, sexual, sexualdesire
खबरडेस्क, ११ फागुन । यौन उत्तेजनाको समस्या महिला र पुरुष दुवैमा हुने गर्दछ । महिलाहरुमा उत्तेजनाको बेला यौनाङ्ग मुलायम भै फैलिने र रसिलो हुने प्रक्रियामा गड्बडी हुने समस्या हुन्छ । धेरै महिलाहरुमा डर, त्रास, संकोच जस्ता मनोगत कारणहरुले पनि यौन… बाँकी अंश »
महिलाहरू कुन अंगमा छुँदा उत्तेजित हुन्छन् ?
Tags: alert-news, body-part, emotions, featured, in-focus, nepaljapan, women
खबरडेक्स, ३ मंसिर । हामिले सहजै बुझेको कुरा पनि हो महिलाहरुको अंग पुरुषहरुको भन्दा बेग्लै हुन्छ । तर पुरुषहरुका लागि कौतुहल्ताको बिषय भनेको महिलाको शरीरमा कुन अंग कति संवेदनशील होला भन्ने हो । अब भने यो बिषयमा धेरै सोचिरहनु पर्दैन… बाँकी अंश »